Rudzikinuro rwaKristu—Chipo Chikuru Kwazvo chaMwari | Bhaibheri Rinodzidzisei?
Rudzikinuro rwaKristu—Chipo Chikuru Kwazvo chaMwari
Rudzikinuro rwacho chii?
Ungaratidza sei kuti unoruonga?
1, 2. (a) Chipo chinonyanya kukosha kwauri papi? (b) Nei zvinganzi rudzikinuro ndirwo chipo chinokosha zvakanyanya chawaizombofa wagamuchira?
CHIPO chikuru kwazvo chawati wambogamuchira chii? Chipo hachifaniri hacho kuva chinodhura kuti chive chinokosha. Chokwadi, kukosha chaiko kwechipo hakuratidzwi hako nemari yacho. Asi kana chipo chichiita kuti ufare kana kuti chiine zvachinokubatsira chaizvo muupenyu hwako, chinokosha zvikuru kwauri.
2 Pazvipo zvizhinji zvawaizotarisira kugamuchira, pane chimwe chete chinokunda zvimwe zvose. Icho chipo chakapiwa vanhu naMwari. Jehovha akatipa zvinhu zvakawanda, asi chipo chake chikuru kwazvo chaakatipa chibayiro chorudzikinuro choMwanakomana wake, Jesu Kristu. (Mateu 20:28) Sezvatichaona muchitsauko chino, rudzikinuro rwacho ndicho chipo chinokosha kwazvo chawaizombofa wagamuchira, nokuti chinogona kukuunzira mufaro usingatauriki uye chinogona kukubatsira pane zvaunoda zvinonyanya kukosha. Zvechokwadi rudzikinuro ndirwo kuratidzirwa kukuru kwazvo kworudo rwaJehovha kwauri.
3. Rudzikinuro chii, uye chii chatinofanira kutanga tanzwisisa kuti tizonzwisisa zvizere chipo ichi chinokosha?
3 Kana zvichitaurwa zviri nyore, rudzikinuro inzira yaJehovha yokununura, kana kuti yokuponesa, vanhu muchivi norufu. (VaEfeso 1:7) Kuti tinzwisise zvinorehwa nedzidziso iyi yeBhaibheri, tinofanira kufunga pamusoro pezvakaitika kare mumunda weEdheni. Tikangonzwisisa chete zvakaraswa naAdhamu paakatadza tinogonawo kunzwisisa nei rudzikinuro ruri chipo chinokosha zvakadaro kwatiri.
4. Upenyu hwomunhu hwakakwana hwairevei kuna Adhamu?
4 Paakasika Adhamu, Jehovha akamupa chinhu chinokosha zvechokwadi—upenyu hwomunhu hwakakwana. Funga kuti izvozvo zvairevei kuna Adhamu. Zvaakanga asikwa aine muviri uye pfungwa zvakakwana, aisazomborwara, kukwegura, kana kuti kufa. Somunhu akakwana, aiva noukama chaihwo naJehovha. Bhaibheri rinotaura kuti Adhamu akanga ari “mwanakomana waMwari.” (Ruka 3:38) Saka Adhamu aiva noukama hwapedyo naJehovha Mwari, sohuya hwomwanakomana nababa vane rudo. Jehovha aikurukurirana nomwanakomana wake wepasi pano, achipa Adhamu basa rinogutsa uye achimuzivisa zvaaitarisirwa kuita.—Genesisi 1:28-30; 2:16, 17.
5. Bhaibheri rinorevei parinoti Adhamu akasikwa “nomufananidzo waMwari”?
5 Adhamu akasikwa “nomufananidzo waMwari.” (Genesisi 1:27) Izvozvo zvaisareva kuti Adhamu aiva nechitarisiko chakafanana nechaMwari. Sezvatakadzidza muChitsauko 1 chebhuku rino, Jehovha mudzimu usingaoneki. (Johani 4:24) Saka Jehovha haana muviri wenyama neropa. Kusikwa nomufananidzo waMwari zvaireva kuti Adhamu akasikwa aine unhu hwakaita sohuya hwaMwari, hunosanganisira rudo, uchenjeri, kururamisira, uye simba. Adhamu akanga akaita saBaba vake mune imwe nzira inokosha pakuti aizvisarudzira. Saka Adhamu akanga asina kuita somuchina unongoita zvawakagadzirirwa kuti uite chete kana kuti zvawakarongerwa kuti uite. Asi aigona kuzvisarudzira, achisarudza zvakanaka nezvakaipa. Kudai akanga asarudza kuteerera Mwari, angadai akararama nokusingaperi muParadhiso pasi pano.
6. Adhamu paasina kuteerera Mwari, akarasikirwa nei, uye vana vake vakabatanidzwa sei?
6 Saka zviri pachena kuti Adhamu paasina kuteerera Mwari, akatongerwa rufu, akarasikirwa nechinhu chinokosha zvikuru. Chivi chake chakaita kuti arasikirwe noupenyu hwake hwakakwana pamwe chete nezvikomborero zvahwo zvose. (Genesisi 3:17-19) Zvinosuruvarisa kuti Adhamu haasi iye chete akarasikirwa noupenyu uhwu hunokosha asiwo vana vake vomunguva yemberi. Shoko raMwari rinoti: “Chivi zvachakapinda munyika nomunhu mumwe chete [Adhamu] uye rufu zvarwakapinda nechivi, saizvozvowo rufu rwakapararira kuvanhu vose nokuti vose vakanga vatadza.” (VaRoma 5:12) Chokwadi, tose zvedu takaberekwa tiine chivi chakabva kuna Adhamu. Nokudaro Bhaibheri rinotaura kuti ‘akazvitengesa’ pamwe chete nevana vake muuranda hwechivi norufu. (VaRoma 7:14) Pakanga pasina tariro nokuda kwaAdhamu naEvha nokuti vakasarudza nemaune kusateerera Mwari. Asi zvakadini nevana vavo, kusanganisira isu?
7, 8. Rudzikinuro rungareva zvikurukuru zvinhu zviviri zvipi?
7 Jehovha akasarudza kununura vanhu achishandisa rudzikinuro. Rudzikinuro chii? Pfungwa yorudzikinuro ingareva zvikurukuru zvinhu zviviri. Kutanga, rudzikinuro imari inobhadharwa yokusunungura kana kuti kutengazve chimwe chinhu. Rungafananidzwa nemari inobhadharwa kuti musungwa anenge abatwa muhondo asunungurwe. Chechipiri, rudzikinuro imari inobhadhara mutengo wechimwe chinhu. Rwakafanana nemari inobhadharwa nokuda kwokukuvadzwa kunenge kwaitwa munhu kana chinhu. Somuenzaniso, kana munhu akakonzera tsaona, anofanira kubhadhara chitsama chinonyatsoenderana, kana kuti chakaenzana noukoshi hwezvinenge zvaparadzwa.
8 Zvaizogoneka sei kubhadhara chinhu chikuru chatakarasikirwa nacho tose zvedu pamusana paAdhamu ndokusunungurwa muuranda hwechivi norufu? Ngatimbofungai nezvorudzikinuro urwo Jehovha akagovera uye zvazvingareva kwauri.
KUGOVERA KWAKAITA JEHOVHA RUDZIKINURO
9. Rudzikinuro rwakaita sei rwaidiwa?
9 Upenyu hwomunhu hwakakwana zvahwakaraswa, hapana upenyu hwomunhu husina kukwana hwaigona kuzombohudzikinura. (Pisarema 49:7, 8) Chaidiwa rwaiva rudzikinuro rwaikosha zvakafanana nezvakanga zvaraswa. Izvi zvinoenderana nomutemo wokururamisira kwakakwana uri muShoko raMwari, unoti: “Mweya unofanira kutsiviwa nomweya.” (Dheuteronomio 19:21) Saka chii chaizoripa zvakakwana kukosha kwomweya wakakwana womunhu, kana kuti upenyu, hwakaraswa naAdhamu? Humwe upenyu hwomunhu hwakakwana ndihwo “rudzikinuro runoenzanirana” rwaidiwa.—1 Timoti 2:6.
10. Jehovha akagovera sei rudzikinuro?
10 Jehovha akagovera sei rudzikinuro rwacho? Akatuma mumwe wevanakomana vake vomudzimu vakakwana pasi pano. Asi Jehovha haana kungotuma chero chisikwa chipi zvacho chomudzimu. Akatuma chaikosha zvakanyanya kwaari, Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga. (1 Johani 4:9, 10) Achizvidira, Mwanakomana uyu akasiya musha wake wokudenga. (VaFiripi 2:7) Sezvatakadzidza muchitsauko chakapfuura chebhuku rino, Jehovha akaita chishamiso paakatamisa upenyu hwoMwanakomana uyu kuenda mudumbu raMariya. Pachishandiswa mudzimu mutsvene waMwari, Jesu akaberekwa somunhu akakwana uye akanga asina chivi.—Ruka 1:35.
Jehovha akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga kuti ave rudzikinuro rwedu
11. Munhu mumwe chete aigona sei kuva rudzikinuro rwemamiriyoni evanhu?
11 Munhu mumwe chete aigona sei kuva rudzikinuro rwevazhinji, chokwadika, rwemamiriyoni evanhu? Ko mamiriyoni evanhu akambova sei vatadzi pakutanga? Yeuka kuti nokutadza kwaakaita, Adhamu akarasa upenyu hwakakwana hwaikosha hwaaiva nahwo. Saka, aisagona kupfuudza upenyu hwakakwana ihwohwo kuvana vake. Pane kudaro, aigona kupfuudza chivi norufu chete. Jesu, uyo Bhaibheri rinoti “Adhamu wokupedzisira,” aiva noupenyu hwomunhu hwakakwana, uye haana kumboita chivi. (1 VaKorinde 15:45) Mupfungwa yakati, Jesu akapinda munzvimbo yaAdhamu kuti atinunure. Nokupa upenyu hwake hwakakwana achiteerera Mwari zvakakwana, Jesu akabhadhara mutengo wechivi chaAdhamu. Saka Jesu akaunza tariro kuvana vaAdhamu.—VaRoma 5:19; 1 VaKorinde 15:21, 22.
12. Kutambura kwaJesu kwakaratidzei?
12 Bhaibheri rinotsanangura nemashoko akadzama kutambura kwakatsungirirwa naJesu asati afa. Akarohwa zvakaomarara, akarovererwa zvine utsinye, uye akafa zvinorwadza padanda rokutambudzikira. (Johani 19:1, 16-18, 30; Mashoko Okuwedzera, mapeji 204-6) Nei zvakanga zvakakodzera kuti Jesu atambure zvikuru saizvozvo? Mune chimwe chitsauko chinotevera chebhuku rino, tichadzidza kuti Satani haana kuva nechokwadi chokuti Jehovha ane vanhu vanomushumira avo vaizoramba vakatendeka vachiedzwa. Nokutsungirira akatendeka pasinei nokutambura kukuru, Jesu akapa mhinduro yakanaka kwazvo pakupomera kwaSatani. Jesu akaratidza kuti munhu akakwana anozvisarudzira anogona kuramba akavimbika zvakakwana kuna Mwari pasinei nezvingaitwa naDhiyabhorosi. Jehovha anofanira kuva akafara kwazvo nokutendeka kwoMwanakomana wake anodiwa!—Zvirevo 27:11.
13 Rudzikinuro rwakabhadharwa sei? Pazuva rechi14 romwedzi wechiJudha waNisani, 33 C.E., Mwari akabvumira Mwanakomana wake akakwana, asina chivi kuti aurayiwe. Saka Jesu akabayira upenyu hwake hwakakwana “kamwe chete zvachose.” (VaHebheru 10:10) Pazuva rechitatu pashure pokunge Jesu afa, Jehovha akamumutsira kuupenyu hwomudzimu. Ava kudenga, Jesu akapa Mwari kukosha kwoupenyu hwake hwakakwana hwaaiva nahwo ari munhu hwakabayirwa kuti huve rudzikinuro mukutsinhana nevana vaAdhamu. (VaHebheru 9:24) Jehovha akagamuchira kukosha kwechibayiro chaJesu sorudzikinuro rwaidiwa kuti vanhu vanunurwe muuranda hwechivi norufu.—VaRoma 3:23, 24.
ZVINGAREHWA NORUDZIKINURO KWAURI
14, 15. Kuti ‘tikanganwirwe zvivi zvedu,’ tinofanira kuitei?
14 Pasinei zvapo nokuva kwedu nechivi, tinogona kuva nezvikomborero zvisingatauriki zvinounzwa norudzikinuro. Ngatimbokurukurei zvimwe zvatinobatsirwa nazvo nechipo ichi chikuru kwazvo chaMwari iye zvino uye munguva yemberi.
15 Kukanganwirwa zvivi. Pamusana pokusakwana kwatakaberekwa nako, tinotofanira kurwisa chaizvo kuti tiite zvakarurama. Tose zvedu tinotadza pakutaura kana kuti pane zvatinoita. Asi kuburikidza nechibayiro chorudzikinuro chaJesu, tinogona ‘kukanganwirwa zvivi zvedu.’ (VaKorose 1:13, 14) Zvisinei, kuti tikanganwirwe, tinofanira kupfidza zvechokwadi. Tinofanirawo kuteterera Jehovha tichizvininipisa, tichikumbira kuti atikanganwire nokuda kwokutenda kwedu chibayiro chorudzikinuro choMwanakomana wake.—1 Johani 1:8, 9.
16. Chii chinoita kuti tikwanise kunamata Mwari nehana yakachena, uye kuva nehana yakadaro kunokosha zvakadini?
16 Hana yakachena pamberi paMwari. Hana ine mhosva inogona nyore nyore kuita kuti tisava netariro, yoita kuti tifunge kuti hatikoshi. Zvisinei, nokukanganwirwa kunounzwa norudzikinuro, Jehovha nenzira yomutsa anoita kuti tikwanise kumunamata nehana yakachena pasinei nokusakwana kwedu. (VaHebheru 9:13, 14) Izvi zvinoita kuti tikwanise kutaura naJehovha takasununguka. Naizvozvo, tinogona kunyengetera kwaari takasununguka. (VaHebheru 4:14-16) Kuramba tiine hana yakachena kunoita kuti tive norugare rwepfungwa, tizviremekedze, uye tifare.
17. Zvikomborero zvipi zvinogona kuwanika nokuti Jesu akatifira?
17 Tariro youpenyu husingaperi muparadhiso pasi pano. “Mubayiro wechivi ndirwo rufu,” inodaro VaRoma 6:23. Ndima iyoyo inowedzera kuti: “Asi chipo chinopiwa naMwari achishandisa Kristu Jesu Ishe wedu ndihwo upenyu husingaperi.” MuChitsauko 3 chebhuku rino, takakurukura zvikomborero zveParadhiso yepasi pano iri kuuya. (Zvakazarurwa 21:3, 4) Zvikomborero zvose izvozvo zvomunguva yemberi, kusanganisira upenyu husingaperi tiine utano hwakakwana, zvinogona kuwanika nokuti Jesu akatifira. Kuti tiwane zvikomborero izvozvo, tinofanira kuratidza kuti tinoonga chipo chorudzikinuro.
UNGARATIDZA SEI KUONGA KWAKO?
18. Nei tichifanira kuonga Jehovha nokuda kwechipo chorudzikinuro?
18 Nei tichifanira kuonga kwazvo Jehovha nokuda kworudzikinuro? Chokwadi, chipo chinonyanya kukosha kana munhu ari kuchipa ashandisa nguva yake, ashanda zvakaoma, kana kuti ashandisa mari kuti atipe chipo chacho. Tinobayiwa mwoyo patinoona kuti chipo kuratidzirwa kworudo rwechokwadi kunoitwa neari kutipa. Rudzikinuro ndirwo chipo chinokosha kupfuura zvimwe zvose, nokuti Mwari akarasikirwa zvikuru kwazvo kuti arugovere. “Mwari akada nyika kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga,” inodaro Johani 3:16. Rudzikinuro ndirwo uchapupu hunoshamisa kwazvo hwokutida kunoita Jehovha. Uchapupuwo hworudo rwaJesu, nokuti akatipa upenyu hwake achizvidira. (Johani 15:13) Saka chipo chorudzikinuro chinofanira kuita kuti tive nechokwadi chokuti Jehovha noMwanakomana wake vanotida somunhu oga oga.—VaGaratiya 2:20.
Kuziva zvakawanda nezvaJehovha ndeimwe nzira yokuratidza nayo kuti unoonga chipo chake chorudzikinuro
19, 20. Munzira dzipi dzaungaratidza kuti unoonga chipo chaMwari chorudzikinuro?
19 Saka, ungaratidza sei kuti unoonga chipo chaMwari chorudzikinuro? Kutanga, ziva zvakawanda nezvoMupi Mukuru, Jehovha. (Johani 17:3) Kudzidza Bhaibheri uchibatsirwa nebhuku rino kuchakubatsira kuita izvozvo. Sezvaunowedzera kuziva Jehovha, kumuda kwako kuchawedzerawo. Uyewo, kumuda ikoko kuchaita kuti ude kumufadza.—1 Johani 5:3.
20 Ratidza kuti unotenda muchibayiro chorudzikinuro chaJesu. Jesu pachake akati: “Anotenda muMwanakomana ane upenyu husingaperi.” (Johani 3:36) Tingaratidza sei kuti tinotenda muna Jesu? Kutenda kwakadaro hakuratidzwi nemashoko chete. “Kutenda kusina mabasa kwakafa,” inodaro Jakobho 2:26. Chokwadi, kutenda kwechokwadi kunoratidzwa ne“mabasa,” kureva kuti, nezvatinoita. Imwe nzira yatinoratidza nayo kuti tinotenda muna Jesu ndeyokuita zvose zvatinokwanisa kumutevedzera kwete chete pane zvatinotaura asi pane zvatinoitawo.—Johani 13:15.
21, 22. (a) Nei tichifanira kupinda Kudya kwaShe Kwemanheru kunoitwa gore negore?
21 Ivapo paKudya kwaShe Kwemanheru kunoitwa gore negore. Manheru aNisani 14, 33 C.E., Jesu akatanga chiitiko chaicho chinonzi neBhaibheri “kudya kwaShe kwemanheru.” (1 VaKorinde 11:20; Mateu 26:26-28) Chiitiko ichi chinonziwo Chirangaridzo chorufu rwaKristu. Jesu akachitanga kuti abatsire vaapostora vake uye vaKristu vose vechokwadi vaizouya shure kwavo kuti vayeuke kuti norufu rwake somunhu akakwana, akapa mweya wake, kana kuti upenyu, kuti uve rudzikinuro. Nezvechiitiko ichi, Jesu akarayira kuti: “Rambai muchiita izvi muchindiyeuka.” (Ruka 22:19) Kuvapo paChirangaridzo kunotiyeuchidza nezvorudo rukuru rune chokuita norudzikinuro rwakaratidzwa naJehovha naJesu. Tinogona kuratidza kuonga kwedu rudzikinuro nokuvapo panoitwa Chirangaridzo chorufu rwaJesu gore negore. *
22 Rudzikinuro urwu rwatakapiwa naJehovha zvechokwadi chipo chinokosha zvikuru. (2 VaKorinde 9:14, 15) Chipo ichi chisingatauriki chinogona kubatsira kunyange vaya vakafa. Zvitsauko 6 ne7 zvichatsanangura kuti zvingadaro sei?
^ ndima 21 Kuti uwane mamwe mashoko ane chokuita noKudya kwaShe Kwemanheru, ona Mashoko Okuwedzera, mapeji 206-8.
Rudzikinuro inzira yaJehovha yokununura vanhu muchivi norufu.—VaEfeso 1:7.
Jehovha akagovera rudzikinuro nokutuma Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga pasi pano kuti atifire.—1 Johani 4:9, 10.
Kuburikidza norudzikinuro, tinokanganwirwa zvivi, tinowana hana yakachena, uye tariro youpenyu husingaperi.—1 Johani 1:8, 9.
Tinoratidza kuti tinoonga rudzikinuro nokuziva zvakawanda nezvaJehovha, nokuratidza kuti tinotenda muchibayiro chorudzikinuro chaJesu, uye kuvapo paKudya kwaShe Kwemanheru.—Johani 3:16.
Rudzikinuro rwaKristu—Chipo Chikuru Kwazvo chaMwari (Chikamu 1)
Rudzikinuro rwaKristu​—Chipo Chikuru Kwazvo chaMwari (Chikamu 2)